Hojjettoota Waajjiraalee Baankii Daldala Xoophiyaa fi Teelee/Ethio Telecom akkasumas Dhaabbata Ibsaa Xoophiyaa keessa jiraniif! | QEERROO
Hojjettoota Waajjiraalee Baankii Daldala Xoophiyaa fi Teelee/Ethio Telecom akkasumas Dhaabbata Ibsaa Xoophiyaa keessa jiraniif!
Posted on November 19, 2016 by Qeerroo
Noolee Buttaa irraa (17/11/2016
Akkuma beekamu, biyya tokkoof dhalootni biyyi qabdu murteessaadha.Labata/Dhaloota biyyi tokko qabdu keessaa isaan armaan gadii daran murteessoodha!
1.Gootummaa/Jaynummaa:- gootni biyya tokkoof maatii fi saba keessatti dhalateef murteessaadha.Gootni ejjennoo jabina qabu,gootummaan dhugaa fi haqa ofiif qabu,roorroo isaa fi maatii akkasumas gosaa fi biyya isaatti dhufu qolachuufis barbaachisaa fi murteessaadha! Kanaaf,maatiin gosti fi lammiin akkasumas biyyi tokko goota/jagna(jayna) horachuun barbaachisaadha.
2 Beekaa:- Biyyi tokko beekaa yookiin hayyuu qabaachuun waan murteessaadha.Kana keessatti barnooti aadaa duudhaa fi safuu akkasumas toobaa fi toobbana saba ofii eegee barnoota ammayyaa wajjin saba ofii tajaajiluuf hedduu gargaara.Dhalootni beekumsa akkasiin biyya isaa gargaarus, Beekaa/Hayyuu jedhama.
3 Qaruuxee/Gamna:- kanneen armaan olitti jedherraa, kanneen waa hubachuufi akkataa deebii waan barbaadameefi mala/tooftaa/ barbaadamuuf furmaata waan tokkoo ka’anii fi dhawan gamna jedhamu.
Isaan kun, bakka hojii gara garaattii hawaasa Oromoo keessaa dhalatan keessatti argamu.Kanaafuu, Qabsoo Hawaasi Oromoo taasisaa jiru keessatti namni dhuunfaa waajjiraalee wayyaanee Teelee,Ibsaa fi Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa keessa jirtu maal gargaaruu dandeessa? Maal ooluu fi dandeessaa? Deebiin suma mataa keetiifi
Hojjettoota Ilmaan Oromoo Teelee Xoophiyaa keessa jiraniif!
Akkuama beekamu,Ilmaan Oromoo erga teeleen Xoophiyaa dhaabbatee kaasee, tajaajila gahaa hin arganne.Yeroo fedhanitti bilbilaan kana haasawe jedhee dhaabbati kun ilmaan Oromoo hedduu mana hidhaatti guuraniiru.Dhaabbbati tika TPLF karaa teelee kana GPRSn barbaadee dargaggoota Oromoo hidhaatti guuree jira.
Yeroo ammaa kanas, yeroo itti Naannoon Tigiraayi fi Affaar tajaajila network fi interneetaa ga’aa argatanitti naannoleen biroon mirgi isaanii mulqamee jira.Isaan kana keessaa kan Oromiyaa adda kan ta’eefi waraanni Wayyaanee miidiyaa addunyaa jalaa hawaasa keenya dhoksee badii hangana hin jedhamne nurraan gahaa jiraachuun beekamaadha!
Egaa ilmaan Oromoo dhaabbata kana keessa jiran akkamiin tajaajila barbaadamu hawaasa kanaaf gochuu dadhabdan? Fakkeenyaaf, Heerri Mootummaa Federaalaa caaseffama Naannolee kan deeggaru waan ta’eef maaliif caaseffamni dhaabbata kanaa heera mootummaa Federaalaatiin wal simuu dadhabe kan jedhuuf olaantumma TPLF mirkaneessanii karaa Satalaayitii guumummaa Impaayerattii iddoo tokkotti tiksuufi to’achuuf waan ta’eef dhaabbati kun bulchiinsa tokkummaawaa/unitary state/jalaa bahee naannoleen ofii isaanii akka keessatti hirmaachisan,tikaa fi to’annaa diinagdee jalaa akka bataaniif waamicha koo hangan hubadherraa isinii barreessa!
2 Hojjettoota Nigid Baankii Xoophiyaatiif!
Jalqabatti maqaan daldalaa kan hin jijjiiramne ta’ullee,baankiin kun maqaa Commercial Bank Of Ethiopia/Itiyoophiyaa Nigid Baank/Baankii Daldala Xoophiyaa jedhamuunis maqaa kana maraan daldala.
Egaan Baankiin kun Uummata Oromootiif bakka gaddaa fi gammachuu isaa keessatti kan hin hirmaanneefi kan hin jaallanne yeroo ta’u,ilmaan Oromoo hedduun baankii kana keessaa hojjetan garuu, hedduudha.
Kanaafuu ilmaan Oromoo baankiin kun, afaan aadaafi duudhaa akkasumas ilmaan Oromoo kabajee akka wajjin jiraatu ta’uu baannaan hanga dhumaattuu Oromoon baankii kana balleessuuf akka jiru beekuun, isinis hawaasa irraa dhalattaniif dhiibbaa barbaadamu akka uumtan.
3 Hojjettoota Dhaabbata Ibsaa Xoophiyaatiiif!
Dhaabbati Ibsaa Xoophiyaa jedhamu kun Oromiyaa keessaa laggeen maddan irraa hidhamee utuu jiruu,uummati Oromoo baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa keessaa hanqina Ibsaatiin dararama.Kana malee dhaabbati kun akkuama dhaabbatoota Abisiyaanotaa armaan oliitti eeramanii,afaaniifi aadaa akkasumas duudhaa uummata Oromoo kan hin kabajne Oromiyaa keessatti afaan saba Oromootin alatti tajaajila kenna.
Dhaabbata kana kessatti ilmaan Oromoo gaaffii afaanii fi tajaajila Oromoon malkaa isaarraa dhabe maaliif kaasuu dadhabdanii?
Walumaagalatti dhaabbatootni hedduun, naannoo Oromiyaa keessatti afaan Oromootiin hojjechuu akka qaban,hawaasni Oromoo afaan isaatiin dhaabbilee lafasaarraa,biyyasaarra faayidaa argatnirraa deebisee akka argatuuf hojjettoonni waajjiraalee kanaa dirqama lammummaa keessanii akka baatan isinii dhaama!
Injifannoon Uummata Oromootiif!
1 thought on “Hojjettoota Waajjiraalee Baankii Daldala Xoophiyaa fi Teelee/Ethio Telecom akkasumas Dhaabbata Ibsaa Xoophiyaa keessa jiraniif!”
gonfa getachew on November 19, 2016 at 4:00 pm said:
yaada baayyee gaariitu as bahee jira. baayyee galatoomaa qalamni keessaan hin dhumiin! mee amma dandaahamaa tahetti namoonni dhaabbilee kanneen keessaa jiran harka lafa jalaatiin ykn immoo nageenya isaanii tiksaatii osoo karaa isaaniif dandaahame ummata cinaa dhaabbatanii gaariidha. silaa eessatti taha, itti gaafatamaan humna ibsaa mootummaa federaalaati jedhu;kunis immoo yeroo baayyee angawoota tigreetiin hooggannama. kan teeles, kan baankiis akkanuma! maal baasuuf dhama raasuu!, mee waan hundaafuu guyyaan jira!, jabaadha ija jabaadha ni darba! akka fakkeenyatti osoon isiniif kaasee ani jiraataa aanaa jalduu godina shawaa lixaati, innis waahee ibsaa osoo fudhannee tajaajilli ummanni ibsaa irraa argatu baayyee gad aanadha. kunis barattoonni galgala yeroo qohannaa eegalan eegameetu cufama , nama qoxaari irra ciisan fakkaatu, amma yoo bade amma dhufa ,akkasumas uummanni tajaajila akka miidhaan nyaataa daaksifaachuu irratti baayyee rakkachaa jira. uummanni lafoodhaan fageenya gara kiloometra 13 fi isa olii deeme ibsaa barbbaacha jaldu magaalaa guddoo aanaa imala.isaan garuu warri so called democratic government(opdos haa tahu) dhimma uummataa hin qaban uummanni jiruu isaa gatee guyyaa lamaa fi isaa oliif ibsaa eegachuuf; beelahaa, dheebochaa fikkf dararamaa jiraatu.maal kana qofaa waan jennee dubbannu hin qabnu , kana dhiifama qaamni dubbisu na oofkalchaa! hin sodaannu!, hunduu ni darba!